Xanta ayaa sii socota inay soo jeediso in 3D Touch uu baaba'o doono 2019 | Wararka IPhone
Xanta ayaa sii waday inay tilmaamayso 3D Touch oo baaba'aya sanadka 2019
El qalabka tufaaxa waxay si joogto ah ugu socotaa inta udhaxeysa jiilalka qalabka. Khadadka qaarkood ee koodhka ama qaababka hawlgalka ee nidaamyada cusub ee hawlgalka ayaa na hagaya halka ay Apple u dhaqaaqayso soo saarista aalado cusub. Marka laga hadlayo macruufka 13 waxaa jira shaqooyin cusub oo kala duwan oo nagu hagaya inaan ka fikirno, oo ay weheliyaan warbixinno iyo warbixinno bilooyin ka hor ah, taas Nidaamka 3D Touch ee casriga weyn ee Apple wuxuu ku baaba'ayaa iPhone-ka sanadka 2019. Ma inaan si macno leh u sagootinno hab qeexan oo ku saabsan tikniyoolajiyaddan oo malaayiin isticmaaleyaal ah ay maalin walba u adeegsadaan iPhone XI cusub iyo XI Max?
Sagootin kama dambeys ah 3D Touch, oo marba marka ka dambeysa u soo dhowaanaya
IOS 13 kuwa cusub ayaa soo muuqday liiska waxqabadka degdegga ah, taas oo lagu dhaqaajin karo iyada oo la xoojinayo tiknoolajiyadda Haptic Touch, ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqday iPhone XR. Taasi waa, waxaan gujineynaa shay iyo dhowr ilbiriqsi kadib isla isla menusyada waxqabadka degdega ah ee soo baxa haddii aan ku riixno 3D Touch haddii qalabkeena uu leeyahay tiknoolajiyadda la soo bandhigo. Joogitaanka meerisyadan dhaqso badan ayaa nagu hagaya luminta 3D Touch.
Dhowr bilood ka hor, Wall Street Journal ayaa ku dhawaaqday in Apple ay ka fiirsaneyso inay ka saarto iphone-ka mustaqbalka teknolojiyadda dareemaya cadaadiska, oo loo yaqaan 3D Touch. In kasta oo warbixintu aysan lahayn xoog badan, maanta DigiTimes ayaa sheegay in Apple wuxuu damacsan yahay inuu tikniyoolajiyaddan ka saaro dhammaan iPhones-ka 2019-ka mahadsanid ilaha iibiyeyaasha iyo warshadaha aan la magacaabin.
Runtu waxay tahay in sababta Big Apple u doonayo inuu uga takhaluso qaybtan qalabka kombuyuutarradeeda casriga ah aan la garanayn laakiin waxaa laga yaabaa inay la xiriirto waxa ay doonayaan inay sameeyaan aalado khafiifsan oo fudud. iyo yeelashada qaybo dheeraad ah shaashadda waxay ka hortageysaa yareynta astaamahaas aan kor ku soo sheegnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Xanta ayaa sii waday inay tilmaamayso 3D Touch oo baaba'aya sanadka 2019
Apple Music ee ardayda waxay kordhinayaan mudada tijaabada ilaa 6 bilood